मध्ये दसैंको रौनकमा छौं । तर, उत्साह छैन । एउटा कोरोना र अर्को जिम्मेवारी । दसैं दसैं जस्तो नभएको निकै वर्ष भइसकेछ । दसैं त बाल्यकालमा मात्रै आउँदो रहेछ झैं लाग्छ हिजोआज सम्झँदा । आमाको काखमा बसेर मावली ह...
२९ असोज, २०७८
मास्टर्स पढ्दै गरेकी एउटी युवतीका आँखामा के–के सपना अटाउँनु पर्थ्याे ? के–के सपना सजाउनु पर्थ्यो उसले आफ्नो मनमा । उसका सपनामा सँगै हैसे गरिदिने समाज निर्माण भैसक्यो ? अँह ! भैसकेको थिए...
हिन्दुहरुको महान् चार्ड दसैं । दसैंमा किनमेलको बेग्लै चटारो हुन्छ । दसैंका लागि मानिसहरुले नयाँ पहिरनमा ठूलो रकम खर्च गर्छन् । हरेक साल कस्ता पहिरन लगाउने भन्ने कुराले कपडा किन्ने बेला धेरैलाई तनाव दिने गरेको...
दलिनको काँटीमा झुण्डिएको रेडियो सुनाइरहन्थ्यो जम्मु–काश्मिरको लडाइँको कथा । यता बुटवलमा काश्मिरको त्यही कथा सुन्थे र चोइटिन्थे लक्ष्मण रायामाझी । उनकै आँगनको बाटो भएर एकदिन पल्टनको लाहुरे घर फर्किंदै थिए ...